Rahoviana ny FTC no handoa vola amin'ny endorsement an'ny olo-malaza? | Martech Zone
Ny fampitandremana avy amin'ny Federal Trade Commission dia nalefa, mailaka mivantana 90 mahery ho an'ireo mpivarotra sy ireo mpanan-kery ao aminy, anisan'izany ireo mpilalao sy mpitendry toa an'i Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Hailey Baldwin, Sofia Vergara, Lindsay Lohan, Sophia Bush, Zendaya Coleman, Jennifer Lopez, Luke Bryan, ary Sean Combs.
Nanoratra momba izany izahay famborahana taloha, saingy mbola gaga ihany aho amin'ny isan'ny influencer izay tsy miraharaha ny fizarana ny fifandraisana ara-bola na ara-barotra ananany amin'ireo orinasa lazain'izy ireo. Rehefa manana aho fifandraisana material miaraka amina orinasa iray, miasa aho hampahafantatra izany fifandraisana izany amin'ny ambaratonga vitsivitsy:
Ny atiny rehetra Mamoaka aho, na bitsika na lahatsoratra iray manontolo, dia hisy hilaza fa mpanjifa izy ireo na mpiara-miasa izahay, mizara doka, na mpanohana.
Manerana ny tranokalako, Mizara ny anaran'ny orinasa iarahako miasa aho. Ho hitanao mihodina etsy ambany ireo mari-pamantarana an'ireo mpanohana ahy.
Na ny ahy aza Terms amin'ny Service milaza fa miresaka momba ny mpanjifa aho matetika na hoe manana fifandraisana ara-bola aho ary mampiharihary azy ireo. Zava-dehibe ny manamarika fa ny TOS ankapobeny dia tsy mandrakotra ny torolàlana FTC, na izany aza!
Mahatsiaro ho toy ny iray amin'ireo vitsy aho, na izany aza.
Fanambarana tsy mazava sy tsy mazava
Ireo teny roa ireo dia lakilen'ny torolàlana FTC. Na izany aza, mihaino podcast aho, mijery horonantsary mivantana, ary mamaky fanavaozana ara-tsosialy isan'andro avy amin'ireo mpitarika eo amin'ny sehatry ny varotra izay tsy anambaran'izy ireo akory ny fifandraisany manokana amin'ny mpivarotra, ny kaonferansa ary na ny mpanjifany manokana aza. Herinandro sy herinandro dia hiresaka momba ny fampiasana fitaovana izy ireo ary hiakatra fa mpanjifa azy ireo ny orinasam-pitaovana. Ankoatry ny fanitsakitsahana ny torolàlana FTC momba ny fanambarana, dia fanararaotana ho an'ny mpihaino sy ny fiarahamonin'izy ireo izany.
Tsy hoe manelingelina fotsiny izany, manana orinasam-pandefasana rindranasa mifandray amiko tsy tapaka izay maniry handoa ahy hametraka backlinks ao anatin'ny atiny sy tsy mangataka fampandrenesana izy ireo. Manontany azy ireo mazava foana aho amin'ny valinteniko raha mangataka amiko izy ireo mba hanitsakitsaka mivantana ny torolàlana FTC momba ny fanambarana. Tsy nahazo valiny tohiny mihitsy aho.
Ireo mailaka fampitandremana nalefa avy amin'ny FTC dia fampitandremana teo am-pelatanan'ny indostria iray manontolo. Tsy tokony hisy tsy hiraharaha ny zava-misy izay nanambara sy nanandratra ny fandefasana ireo mailaka ihany koa. Mampalahelo fa toa tsy voamariky ny fampitandremana ary mety ho fotoana tokony hanaovan'ny FTC ohatra vitsivitsy amin'ireo olo-malaza, sehatra marketing marketing, ary ireo mpivarotra mahazo ny serivisy.
Ny FTC's Endorsement Guides dia nanambara fa raha misy ny "material material connection" eo amin'ny endorser sy ny marketer ny vokatra iray - izany hoe ny fifandraisana izay mety hisy fiantraikany amin'ny lanja na fahatokisana omen'ny mpanjifa ny fanekena - tokony ho hita mazava sy mazava tsara izany fifandraisana izany. nambara, raha tsy efa mazava ny fifandraisana amin'ny sahan-kevitry ny fifandraisana misy ny fanekena. Taratasy FTC nalefa tany amin'i Mark King, filohan'ny Adidas Group America Avaratra.
Mbola manitsakitsaka ny torolàlana FTC ireo olo-malaza Instagram
Raha ny marina, ity fikarohana avy amin'ny Mediakix, orinasa iray manangana fampielezana fampielezankevitra mahazatra, dia mampiseho fa ny 93% amin'ny fanekena haino aman-jery sosialy ao amin'ny Instagram dia manitsakitsaka ny torolàlana FTC:
Tags: olo-malazafamborahanaEmily Ratajkowskifankatoavanaftcftc mailakaFampitandremana amin'ny mailaka ftctorolàlana ftcfampitandremana ftcHailey Baldwinhery miasa manginamarketing marketingInstagramJennifer LopezKendall JennerLindsay LohanLuke bryanfifandraisana materialSean CombsSofia VergaraBush SophiaZendaya Coleman
Fantaro ny fampiasanao, ny famoahana azy ary ny IP anao